Gịnị mere na-ehichapụ ọ bụ furu efu foto ike-natara?
Ọ bụ ihe na biakwa obibia eziokwu na onye ọrụ mgbe ọ bụla deletes faịlụ ma ọ bụ na foto ha nwere ike natara enweghị ihe ọ bụla hassle na nke na na nke a na data mgbake software omume bụ onye nke kasị mma. N'ókè-echebara echiche na nke a mmekọrita bụ na otú data mgbake omume na-enwe ike iji nweta ihe mere n'ime oge ọ bụla na niile mgbe onye ọrụ na onye os na-adịghị ike iji weghachite faịlụ. Azịza ya bụ na mgbe a faịlụ s ehichapụ ọ na-anọgide na draịvụ ike ruo mgbe ọ na-adịghị overwritten ọzọ faịlụ n'otu ebe. The software mgbake omume bụ ndị na-na-abụghị nanị ndị metụtara elu larịị utilities kamakwa jide n'aka na a miri emi Doppler a mụụrụ na nke a iji jide n'aka na faịlụ na-natara na onye ọrụ ọkọkpọhi results na-chọrọ.
Ọ bụrụ na m na mberede ehichapụ data si SD kaadị, ihe m kwesịrị ime?
E nwere ọtụtụ iri puku free data mgbake software omume na a pụrụ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na nke a. N'ókè nke a ga-atụle nke a bụ na onye ọrụ nwere ike maa họrọ a free omume na-faịlụ site na SD kaadị na anọwo na-ehichapụ ma n'ozuzu irè agaghị enwe ugbu n'ebe ahụ dị ka free ga-arụ ọrụ na akara na ego na onye ọrụ nwere emefu nke nyochawa na nke a bụ efu. Iji jide n'aka na faịlụ na-Ewepụtara ọ na-gwara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma a software mmekọ na e weere dị ka ndị kasị mma a ga-akọwa n'ọkara ikpeazụ nke isiokwu a na ọ ga-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi niile arụ ọrụ mere na otu click na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Olee otú naghachi ehichapụ foto ndị si SD kaadị
Ọ bụ otu n'ime ajụjụ ndị azịza nke bụ aha nke ga-n'ụzọ dị ịrịba ama ịgbanwe dịruru ná njọ na nchọgharị ibiere nke onye ọrụ na aha a na ịba uru bụ Wondershare Photo Recovery. Usoro ihe omume e mepụtara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na ọkaibe data nlaghachie nhọrọ na-adịghị n'ebe ndị ọzọ. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ihe omume na-akwado ihe karịrị 500 formats na Ya mere ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma isi jide n'aka na needful a mere na faịlụ nke ọ bụla klaasị ma ọ bụ genre na-Ewepụtara enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ bụkwa otu n'ime ndị na omume na e mepụtara eburu n'uche n'ozuzu dịruru ná njọ na ihe iseokwu na onye ọrụ nwere ike na-eche ihu na nke a.
Esonụ bụ ihe ndị formats na-akwado site na usoro ihe omume iji nweta kacha mma n'ihi n'ihi na onye ọrụ na nke a mgbe ọ na-abịa data mgbake:
MP3, WAV, WMA, OGG, AAC, AIF (AIFF), M4A, ufọt ufọt (Midi)
Olee otú naghachi foto site na SD kaadị na Wondershare Photo Recovery
Na-esonụ bụ usoro a ga-soro na nke a iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na nke a:
1. The omume na-na-ebudatara, arụnyere na ulo oru site na ịga na URL http://www.wondershare.com/data-recovery/photo-recovery-guide.html mere na isi interface-egosi:
2. Mgbe ọkụkụ mmalite button ọ na-gwara iji jide n'aka na mbanye si ebe data nlaghachie a chọrọ na-ahọrọ:
3. The Doppler button bụ mgbe ahụ na-enwe iji jide n'aka na isi usoro amalite na software omume ọkọkpọhi niile foto n'ime oge ọ bụla ma ọlị. Na ndị na-ndị na-Ewepụtara nwere ike mfe pịrị iji họrọ na naghachi button bụ mgbe ahụ na-kụrụ iji jide n'aka na needful a mere na usoro-agwụ:
Bilie gị ehichapụ foto azụ na ihe nile na otu Data Recovery Software
Ọ bụrụ na onye ọrụ bụ enweghị ike iji weghachite foto site na n'elu kwuru banyere usoro mgbe ahụ ọ na-gwara-eso njikọ nke Wondershare Data Recovery software iji jide n'aka na needful na-eme. The Complete Guide na ga-bụghị naanị-ọkọnọ ma onye ọrụ ga-ọkọnọ na n'ozuzu screenshots nke usoro na ike ga-eji dị ka a akwụkwọ iji jide n'aka na usoro-anọgide n'ụzọ kwụ ọtọ. Wondershare Data Recovery Na nke a a maara dị ka usoro ihe omume nke nwere ike ime ebube na onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na faịlụ na-Ewepụtara enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ bụ ya mere dụrụ jide n'aka na needful na-eme na ihe kasị mma n'ụzọ na mkpokọta nke na-kpebiri site na isoro usoro a ga-kwuru hereunder iji jide n'aka na onye ọrụ nduzi a nyere ka ukwuu ka o kwere na a kasị mma usoro:
1. The ukara URL ie http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html bụ ka a bịa na iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri na onye ọrụ na-akawanye usoro ihe omume ebudatara:
2. The fie ụdị bụ mgbe ahụ na-ahọpụta ka na nke a:
3. Mgbe ahụ, na-abịa faịlụ ọnọdụ ebe ọ na-efu:
4. Ozugbo faịlụ na-gosiri onye ọrụ nwere ike naghachi ha dị ka kwa ọchịchọ:
Atụmatụ na SD Kaadị data ndabere
-Esonụ bụ ụfọdụ Atụmatụ na mmekọrita doro isiokwu:
1. SATA draịva ga-zụrụ iji jide n'aka na SD kaadị ndabere na-kere na ala na afọ ojuju.
2. The SD kaadị ndabere ga-enịm ke a mma nchekwa nke mere na data anọgide nchebe oge niile
3. The ndabere ekwesịtụghị gbanwere mejupụtara nkwado ndabere na mpaghara ga-dị nnọọ kpochapụ usability na ga-ahụ na onye ọrụ mgbe ọkọkpọhi mbụ ọdịnaya.
Rogue amoeba Software: Audio ikwusi n'ike Pro maka Mac
> Resource> Mac> Naghachi ehichapụ foto ndị si SD kaadị on Mac na windows na 3 nzọụkwụ